Waqtiga boostada: 11-03-2020
Ogsijiin waa mid ka mid ah qaybaha hawada. Waa midab la’aan, ur iyo dhadhan midna. Ogsijiin ayaa ka culus hawada. Waxay leedahay cufnaan dhan 1.429g / L marka loo eego xaaladaha caadiga ah (0 ° C iyo cadaadiska Hawada 101325 Pa), waana lagu milmi karaa biyaha. Si kastaba ha noqotee, kala-baxnimadeeda ayaa aad u hooseysa. Marka cadaadisku yahay 101kP ...Akhri wax dheeraad ah »
“Mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolka badan ee nolosha looga badbaadiyo COVID-19 ayaa ah bixinta oksijiinta bukaannada u baahan. WHO waxay ku qiyaaseysaa in heerka imika ee ~ 1 milyan oo kiis oo cusub usbuucii, in adduunku u baahan yahay qiyaastii 620,000 mitir cubic oo ogsijiin ah maalintii, taas oo ku dhow 88,000 dhululubo waaweyn ah ”- Dr Te ...Akhri wax dheeraad ah »